Maitiro ekuwana akanakisa madhiri kana uchitenga online | ECommerce nhau
Maitiro ekuwana akanakisa madhiri kana uchitenga online
Kana iwe uchida kutsvaga iyo zvinopihwa zvakanak kana uchitenga online, pane zvinhu zvinoverengeka zvaunogona kuita zvinozokutendera kuti utore mukana uye uwane mitengo iri nani. Tarisa uone kurudziro yatinogovana pazasi.
1 Siya ngoro yekutengera
2 Usanyengerwe nekutakura mahara
3 Tora nzvimbo yako kufunga
Siya ngoro yekutengera
Kuti uwane mutengo wakanakisa kana uchitenga online, iyo nzira yekutenga inofanirwa kukamurwa muzvikamu zviviri. Muchikamu chekutanga iwe unofanirwa kuwana chitoro chepamhepo, tsvaga icho chigadzirwa chaunoda uye chiwedzere kune yekutengera ngoro. Wobva wavhara hwindo rebrowser uye womirira zuva kana maviri usati wapedza iyo nzira yekutenga.
Paunenge uchisiya zvigadzirwa mu ngoro yekutenga, zvitoro zvinofungidzira kuti iwe unofarira kutenga icho chigadzirwa, saka zvinowanzoitika kuti vachakupa coupon rekudzikisa kana imwe mhando yekusimudzira yakakosha kuti uve nechokwadi chekuti iwe unozotenga chigadzirwa chavo.
Usanyengerwe nekutakura mahara
Icho chokwadi chekuti chigadzirwa chine mahara kutumira hachireve kuti icho chigadzirwa chichava chaicho chinotengwa. Muchokwadi, iko kwekuti iko kutumira kuri mahara, hakuite kutenga chinhu chikuru. Naizvozvo, kana iwe uchida kutsvaga akanakisa madhiri kana uchitenga online, chakanakisa chinhu chaungaite kuenzanisa iyo yakazara mari muzvitoro zvakasiyana zvepamhepo usati wapedza odha yako.
Tora nzvimbo yako kufunga
Iyo nharaunda yaunogara inogona kutamba uchipesana newe, kunyanya kana iri nzvimbo inoyevedza kana yakapfuma. Kana iwe ukaita zvaunotenga kubva munzvimbo yakarongedzwa seyakanaka, makambani anoziva nzvimbo yako anogona kushandisa iro ruzivo kuwedzera imwe muripo, uchifunga kuti iwe unogona kuifukidza pasina dambudziko. Zvakanaka, iwe unofanirwa kushandisa VPN kushatisa yako IP kero uye nzvenga dambudziko iri. Ipfungwa zvakare yakanaka kutarisa mitengo kana iwe usiri pamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Maitiro ekuwana akanakisa madhiri kana uchitenga online
Ndeapi mavara ari nani kuwedzera kutengesa muEcommerce?